Vahaolana: avrdude: ser_open (): tsy afaka manokatra fitaovana amin'ny Arduino - Ikkaro
firosoana >> Arduino >> Vahaolana: avrdude: ser_open (): tsy afaka manokatra fitaovana amin'ny Arduino
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba famahana lesoka iraisana amin'ny teny Arduino aho:
avrdude: ser_open (): tsy afaka mamoha fitaovana "/ dev / ttyACM0": Nolavina ny fahazoan-dàlana
Rehefa elaela tsy nampiasa Arduino dia naka ny sisitro roa aho (ny voalohany sy ny Elegoo) hanao hetsika vitsivitsy miaraka amin'ny zanako vavy. Mampifandray azy ireo aho, ampidiriko ilay blink mba hahitako fa milamina ny zava-drehetra ary rehefa alefa any amin'ny solaitrabe aho dia mamerina ilay lesoka fanta-daza.
Arduino: 1.8.5 (Linux), Card: "Arduino / Genuino Uno" avrdude: ser_open (): tsy afaka manokatra fitaovana "/ dev / ttyACM0": Nolavina ny fahazoan-dàlana nametraka olana teo amin'ny solaitrabe. Tsidiho ny http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload raha mila sosokevitra ianao.
Na amin'ny PC-nao na amin'ny solosaina findainy dia manana Ubuntu 18.04 napetraka aho.
Manomboka amin'ny fanarahana ny rohy omenao ahy. Ary manaraka ireo dingana aho
En fitaovana / lovia Arduino / Genuino Uno no voafantina
En fitaovana / seranana seranana / dev / ttyACM0
ary araky ny soso-kevitr'ireo antontan-taratasy, raha sanatria misy olana amin'ny Drivers sy permissions, dia manokatra ny terminal aho ary manatanteraka:
izay yourUserName no anaranao
Mivoaka aho izao ary miditra indray. Ary sao dia averiko indray ilay PC / solosaina findainy.
Mbola tsy mandeha amiko io ary tsy manampy intsony ny antontan-taratasy Arduino. Ka nijery foana aho, tao amin'ny forum sy bilaogy. Raha amin'izao fotoana izao dia tsy mety aminao ary ianao toa ahy. Araho ny dingana manaraka
ls / dev / ttyACM0 miverina / dev / ttyACM0
ls -l / dev / ttyACM0 miverina crw-rw—- 1 root dialout 166, 0 Nov 26 16:41 / dev / ttyACM
Amin'izany dia manamafy izahay fa misy ny seranana
Hanome alalana izahay ary hanamarina raha manana alalana ilaina ny mpampiasa anay.
Ary hitako fa ao anatin'ny vondrona ny mpampiasa dialout ka ity ampahany ity dia azontsika tsara.
Ny niasa ho ahy dia ny fametrahana indray ny Arduino.
Raha manamarina ianao
Ary tsy mamerina na inona na inona ny fametrahana indray ny Arduino dia tokony hovahana.
Ary raha mbola tsy vitanao ny namaha ny olana dia avelao aho hanome valiny ary hiezaka ny hanampy anao aho.
Fitaovana famahana olana AVRDUDE
Misy script efa nomanin'izy ireo hamahana ity olana ity. Azonao atao ny manandrana mijery raha manampy anao izany. Tsy nampiasa izany aho fa avelako satria heveriko fa mety ho loharano ilaina.
Mamela fampahalalana kely aho mba hahafantarako tsara ny atao hoe AVRDUDE. Ny anarana dia avy amin'ny AVRDUDE - AVR Downloader / UploaDEr
AVRDUDE dia fitaovana fampidinana / fampidinana / fanodikodinana ny atin'ny ROM sy EEPROM an'ny microcontroller AVR mampiasa ny teknika fandaharana ao anaty (ISP).
AVRDUDE dia natombok'i Brian S. Dean ho tetikasa tsy miankina amin'ny maha programmer ho an'ny microcontrollers Atmel AVR.
Azonao atao ny mahita ilay rindrambaiko sy fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Sokajy Arduino Ticket navigation
Fanehoan-kevitra 1 momba ny "Solution: avrdude: ser_open (): tsy afaka manokatra fitaovana amin'ny Arduino"
1 aprily 2020 tamin'ny 1:02 maraina
Manana olana amin'ny arduino iray aho fa tsy mifandray amin'ny ide na ny mifamadika amin'izany fa voalamina tsara daholo ny zava-drehetra, ny plate port sns ... Nidina ny flip aho saingy tsy fantatro ny fomba fiasan'izy io mba hamerenana ny firmware izay heveriko fa inona no tsy mety, azonao atao ny manana antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba hamerenako ny arduino misaotra fa vaovao aho amin'ity
3 Fitaovana famahana olana AVRDUDE